Kristiyan Malinov နှင့်သူ၏စာအုပ်စီးရီးနဂိုအတိုင်း - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ဟယ်ရီပေါ်တာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့စီးရီး - လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်စာဖတ်သူများသန်းပေါင်းများစွာ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံး။
ဟယ်ရီပေါ်တာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့စီးရီး - လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်စာဖတ်သူများသန်းပေါင်းများစွာ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံး။ ဒါကြောင့်မည်သူမဆိုစိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်တိုင်းအရသာများအတွက်အနည်းငယ်တစ်ခုခုရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက်နေဇာတ်ကောင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏အသီးအသီး၏အသေးစိတ်ရုပျပုံရေးဆှဲအဖြစ်တစ်ဦး Dynamic သင်တန်း။ စာအုပ်တွေအသီးအသီး၏ဇာတ်သိမ်းလာမည့်တဦးတည်းဖတ်ရှုဖို့စိတ်အားထက်သန်သငျသညျချန်ထားမည်နှင့်စီးရီး၏ဇာတျသိမျးဖြစ်စေသငျသညျစိတျပကျြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ငါ့စကားမှဂရုတစိုက်နားမထောငျ - သင်မိမိတို့အယူဝါဒကိုထုတ်ကိုဖွင့်လမ်းဖြင့်ညှဉ်းဆဲစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆိုပါဇာတ်ကောင်မဆိုတွဲရကြဘူး
နဂိုအတိုင်းနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုဖတ်ရှုသူလူတိုင်း, အဆက်မပြတ်စီးရီးတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ရှိကြောင်းငါ့ကိုပြောပြနေကြသည်။ သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်ပျော်မွေ့နိုင်အောင်သူတို့ကလည်းဖြန့်ချိခံရဖို့မြင့်တက်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းလို့မရပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏စာအုပ်တွေများသောအားဖြင့်အတိုးများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူကလုပ်ဖို့အများကြီးမဖတ်ကြဘူးသူကလူများ, စေပြီ။ ငါသူတို့ယခုအချိန်အထိကကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်, ငါသည်အနာဂတ်ကာလ၌ထိုသို့လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဝတ္ထု, သင်နယ်နိမိတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌နယ်နိမိတ်ဘာတွေလဲ? သင်တို့အဘို့နှင့်အခြားသူများ '?
နယ်နိမိတ်သူတို့ကသူ့ကိုကန့်သတ်မယ်လို့ရသောတိုင်းတစ်ဦးချင်းစီမိမိအဘို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရတစ်ခုခု, မဟုတ်တစ်လမ်းထဲမှာရှိပါတယ်။ သူတို့ကသူ့ကိုအောင်မြင်စွာကသူ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ကိုကူညီမယ့်လမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငါ့အဘို့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, နယ်နိမိတ်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးတန်းတူများမှာ - အလုပ်အကြားချိန်ခွင်လျှာနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့လုပ်နေလုပ်နေသငျသညျအလုပ်မလုပ်နေအခါ။ သင်အလုပ်လုပ်နေထုတ်ကုန်ကိုသင်ဖြစ်ဖို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်ချင်ပါတယ်သကဲ့သို့ကောင်းသောအထဲကကိုဖွင့်မပေးစေခြင်းငှါ, သောလက်လွတ်လျှင် - သင်မှုတ်သွင်းနေကြစဉ်ရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးအသားမှာတော့ကနယ်နိမိတ်ထားရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ငါ့ထံမှအကြံဥာဏ်တစ်ဦးကအပိုင်းအစ - လုပ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုစရာမလိုဘဲသင်နှစ်သက်သောတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်တာပါ။
အတိအကျ။ ငါသည်ငါ့စာအုပ်ထုတ်ဝေပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ရှိ၏ သင်သည်တာရှည်နဲ့ Hard အပေါ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်တစ်ခုခုကြည့်ဖို့ ... ဒါဟာ ပြော. မကုန်နိုင်ပါပဲ။ ငါသည်သင်တို့အသီးအသီးကအလိုရှိ၏။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အရေးအပါဆုံးအရာကလူကိုသင်၏အလုပ်ချင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကစဉ်းစားရပ်တန့်မနိုင်နိုင်အောင်ကလုပ်ပါ။ သင်ကသူတို့ရဲ့စဉ်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ရဲ့, သူတို့နောက်ဆုံးတော့သူတို့မိတ်ဆွေများကပြောပြလိမ့်မယ်, သိမြင်, သူတို့သည်တူညီသောပြုကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, ဘီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လှည့်စတင်သည်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ကျနော် (ထိုအဘို့အကျေးဇူးတင်စကား, ယောက်ျားတွေ!) ဤနေရာတွင်ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဖိုရမ်များအတူတက်ရာ၌ကွဲပြားခြားနားသောပြိုင်ပွဲအပြီး, အကြှနျုပျအဘို့အအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့ရဲ့အလုပ်ပြသရန်မကြောက်သင့်ပါတယ်။ အထဲတွင် fit မပြုစေခြင်းငှါဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တယ်မည်မဟုတ်ပါကြောင်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သာအလုပ်အများပြည်သူရောက်ရှိပြီးမှသာရှုံးနိမ့်နိုင်တယ်။
ငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၌ငါ၏အကျိုးစီးပွားငါ Egyptology လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ရှင်းပြမယ်လို့အရာ, ငါကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်အစဉ်အဆက်ကတည်းကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်လည်းငါလက်တင်နှင့်ရှေးဟောငျးဂရိကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်ကတည်းကငါစီးရီး၌ငါ့အသိပညာအသုံးပြုနိုင်တယ်ထင်ပေမယ့်ရဲ့မဆိုထပ်မံကြောင်းကိစ္စစတူးမရကြကုန်အံ့။
အမှတ်အဘယ်သူမျှမပန်းချီဆရာသူစာရေးဆရာ, ပန်းချီဆရာတစ်ဦးအဆိုတော်, စတာတွေရဲ့မသက်ဆိုင်လျှင်, အစဉ်အဆက်ကသူတို့အလုပ်ကိုစွန့်လွှတ်သင့်ပါတယ်။ သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတှေ့လြှငျ, ့လုပ်ပါ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပါပဲ။
သငျသညျ, Kris Malinov အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်:
Facebook ပေါ်မှာ Kris Malinov
Instagram ကိုအပေါ် Kris Malinov
အတတ်ပညာ, စာအုပ်, လူ, နဂိုအတိုင်း | | rating:5/ 30